Alain Delon: chii-TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Alain Delon: chii
Alain Delon: chii
Anotaura zvaanofunga ... zvikurukuru kana chimwe chinhu chisingafadzi iye! NguvaAlain Delon achagamuchira pa 72th Cannes Film Festival une Palme d'honneur yebasa rake rose akazvitaura mumatombo e Figaro Magazine, mumabhuku eChishanu 17. Uye panguva ino, mutambi wacho haana kuvhara mazwi kuti ataure zvaanofunga nezvazvoEmmanuel Macron. Kana iye akabvuma nemwoyo wose kuti iye "Remekedza saiye wokutanga weFrance"kune mania kuMutungamiri weRepublic iyo iye asingadi zvachose.
"Handigoni kutsungirira kuti hatisi kuisa tie", kusununguka pamwe chete Alain Delon. kana Emmanuel Macron usambofa wakakanganwa zvinhu izvi muzvipfeko zvayo pazviitiko zvenyika kana kushanyira kunze kwenyika, murume we Brigitte Macron iye atove akange akawanda kakawanda kubvira pakutanga kwemazuva ake, pasina tete. Asi zvakanyanya kazhinji, kusuruvara kweAlain Delon Kuratidzika kune uyu mania unoenda zvakanaka kupfuura musoro wehurumende.
"Haisi Macron ini handigoni kumira, ndiyo nyika isina tariro yeFrance. Zvinoratidzika kwandiri kuti takarasika tsika dzeduanotsanangura. Icho mutoro wevatongi venyika. Handidi nguva ino nezvose zvinoitika ikoko ", inogumisa Alain Delon. Nostalgia apo iwe unotibata ...
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/people/alain-delon-ce-qu-il-ne-supporte-pas-chez-emmanuel-macron-970326
Meghan Markle ataura kuti vauye navatongi vakawanda veBrithani - "French couture haisi shoma!"
Best Western inokurudzira brand yayo Sure Hotel